အထွေထွေနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ – The Padaythar
ပင်လယ်ရေကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် ရေချိုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီ
[Zawgyi] ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၅ခုနှစ်မှာ လူဦးရေ သန်း၂ထောင်ခန့် ဟာ သောက်သုံးရေ မလောက်ငတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရကိန်းရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ယင်းအတွက် အဖြစ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကတော့ ဆားဓါတ်ဖယ်တဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောကတော့ ဆားငန် ပင်လယ်ရေကို သောက်သုံးလို့ရအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကို
ပညာရေး အထွေထွေနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ အမေးအဖြေ
[Zawgyi] (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ နယူးယောက်မြို့မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် စာပေဟောပြောပွဲတရပ် အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပပြီး သွားခဲ့ပါပြီ။ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေကပါ။ ဟောပြောသူ နှစ်ဦးပါ။ အော်ပီကျယ်နဲ့ မင်းကိုနိုင်။ အဟောကောင်း၊ အပြောကောင်း ပညာရှင်စာရေးဆရာတွေဖြစ်ကြလို့ စနစ်တကျ အသားပါပါ၊
ဓလေ့ရိုးရာ ဗဟုသုတ သမိုင်း အလှအပ အထွေထွေနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ အနုပညာ
[Zawgyi] ဆေးမင်ကြောင်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားပေါ်တွင် သေရာပါသည့်တိုင် စွဲစွဲမြဲမြဲ ထင်နေစေရန် ဆုတ်၊ ဆူးချွန် အစရှိသည့် ကိရိယာများဖြင့် ဆေးရောင်သွင်းကာ ရုပ်ပုံများ၊ အမှတ်အသားများ၊ စာလုံးများနှင့် ပန်းကနုတ်များကို အလှအပ အလို့ငှာ ထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံတကာမှ လူငယ်များသည် ဆေးမင်ကြောင် (Tattoo)
ကိုးကားဖော်ပြချက်များ လူမှုဘဝ အထွေထွေနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ
အင်္ဂလိပ် စကားပုံများနှင့် ယင်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်
[Zawgyi] English proverbs with their meaning A. A bad excuse is better than none. I. ညံ့ဖျင်းသော ဆင်ခြေသည် ဆင်ခြေလုံးဝမပေးခြင်းထက် ပိုကောင်း၏။ B. A bad fenny always
ကျန်းမာရေး အကြံပြုချက် အထွေထွေနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ ဆောင်းပါး
[Zawgyi] (ယာဘ၊ ရာဘ၊ ရာမ၊ ယာမ) ဆိုတာ Methamphetamine (မက်သမ်ဖတမင်း) ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရေခဲလို့လဲ ခေါ်တယ်။ သူများ နိုင်ငံတွေမှာ Ice, Speed, Meth, Crystal, Crank စသဖြင့်ခေါ်တယ်။ အဖြူရောင် အနံ့မရှိဘူး။ ရေ၊ အရက်ထဲမှာ